Uanyanisi - Wikipedia
U- anyanisi (i- Allium cepa L., osuka ku-Latin cepa "anyanisi"), owaziwa nangokuthi u- anyanisi wesigaxa noma u- anyanisi ovamile, uyimifino okuyizinhlobo ezilinywa kakhulu kunazo zonke kuhlobo lwe- Allium.I- shallot yizinhlobonhlobo zezitshalo ze-anyanisi.Kuze kube ngu-2010, i-shallot yahlukaniswa njengenhlobo ehlukile.
Izihlobo zayo eziseduze zifaka ugarlic, iscallion, leek, chive, no- anyanisi waseChina.
Lolu hlobo luqukethe nezinye izinhlobo eziningana ezibizwa ngokuthi u-anyanisi futhi zitshalwe ukuze zidliwe, njenge-anyanisi i-Japanese bunching ( Allium fistulosum ), u- anyanisi wesihlahla ( A. × proliferum ), no-anyanisi waseCanada ( Allium canadense ). Igama "u- anyanisi wasendle " lisetshenziswa ezinhlotsheni eziningi ze- Allium, kepha u- A. cepa waziwa kuphela ngokutshalwa.Uhlobo lwayo lokhokho lwasendle alwaziwa, yize ukweqa ekulimeni sekusungulwe kwezinye izifunda.U-anyanisi uvame ukuba yisitshalo esiyiminyaka emibili noma esingapheli, kepha uvame ukuphathwa njengonyaka futhi uvunwe ngenkathi yokuqala yokukhula.
Isitshalo sika-anyanisi sinefeni lamaqabunga angenalutho, aluhlaza okwesibhakabhaka futhi isibani saso phansi kwesitshalo siqala ukuvuvukala lapho kufinyelelwa ubude bosuku oluthile.Ama-bulb akhiwe ngeziqu ezifushanisiwe, ezicindezelweyo, ezingaphansi komhlaba ezizungezwe isikali esinamanzi (amaqabunga) amboza ihlumela eliphakathi ekugcineni kwesiqu. Ekwindla (noma entwasahlobo, esimweni sokwenza u-anyanisi ngaphezulu), amahlamvu ayaphela futhi izingqimba zangaphandle ze-bulb ziba zomile futhi ziqhekeke.Isivuno siyavunwa futhi somiswe futhi u-anyanisi ulungele ukusetshenziswa noma ukugcinwa.Isivuno lesi sijwayele ukuhlaselwa yizilokazane nezifo eziningi, ikakhulukazi impukane u-anyanisi, u- anyanisi wesikhunta, nesikhunta ezahlukahlukene ezingadala ukubola.Ezinye izinhlobo ze- A.cepa, njenge- shallots namazambane anyanisi, zikhiqiza ama-bulb amaningi.
I-anyanisi ebulalayo izwela ubude bosuku; ama-bulb abo aqala ukukhula kuphela ngemuva kokuthi inani lamahora emini seledlule inani elithile elincane. Iningi lo-anyanisi wendabuko wase-Europe kubhekiselwa kulo njengo-anyanisi "wosuku olude", okhiqiza ama-bulbs kuphela ngemuva kwamahora ayi-14 noma ngaphezulu kokukhanya kwelanga. Izinhlobo zaseNingizimu neYurophu nezaseNyakatho ne-Afrika zivame ukubizwa ngezinhlobo ze- "intermediate-day", ezidinga kuphela amahora ayi-12-13 emini ukuze kukhuthazwe ukwakheka kwe-bulb. U-anyanisi "wosuku olufushane", othuthukiswe ezikhathini zakamuva kakhulu, utshalwe ezindaweni ezipholile ebusika ekwindla bese wenza ama-bulbs entwasahlobo, futhi adinga kuphela amahora ayi-11 kuya ku-12 emini ukukhuthaza ukwakheka kwe-bulb. U-anyanisi uyisitshalo sezulu esipholile futhi ungatshalwa ezindaweni ze-USDA 3 uku 9. Amazinga okushisa ashisayo noma ezinye izimo ezicindezelayo zibangela ukuba " umshudo ", okusho ukuthi isiqu sembali siqala ukukhula.
"https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Uanyanisi&oldid=93265" تان ورتل
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-25 uMandulo 2021, nge-21:41.